Naya Bikalpa | पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रात्रिभोजमा किन छुटाईदैनन् उनीहरु ? - Naya Bikalpa पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रात्रिभोजमा किन छुटाईदैनन् उनीहरु ? - Naya Bikalpa
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रात्रिभोजमा किन छुटाईदैनन् उनीहरु ?
प्रकाशित मिती: २०७७ पुष २१, १५: ०१: २४
काठमाडौं – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बीरविक्रम शाह यतिवेला निकै उत्साहित छन् । २०६५ असार २९ देखि नागार्जुन दरबार बस्न थालेका उनी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि त्यहाँ जाँदैनन् र यतिबेला निर्मल निवासमै बस्छन् ।
संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लागूसँगै संघीय संरचना बमोजिमका तीन तहका सरकार गठनसँगै क्रियाशिल भए तर अलोकप्रीय हुन थाल्दा राजतन्त्रबादीहरु जुर्मुराउन थाले । जसले गर्दा स्वयम् पूर्वराजा झन उत्साही छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा उत्साह थप्ने कारण सरकारको अलोकप्रीयता मात्र नभएर राजाबादीहरुको एकता र क्रियाशिलतासँगै राजनीतिक दल र पत्रकारको भित्री सहयोग एवम् साथ पनि कारण बन्न थालेको छ । त्यसैले सत्ताको अलोकप्रीयताको लाभ आफूमा पार्न संचारको सहायता उनले लिने रणनीति थालेका छन् ।
‘गुड फ्राईडे’ भन्दै शुक्रबार साँझ दरबार र निवासमा रात्रिभोजको आयोजना हुनु र जमघट हुनु शाही खानदानी संस्कार नै मानिन्छ । नारायणहिटीबाट हटेसँगै शुक्रबारको रात्रिभोज गर्न छाडेर विदेश भ्रमण र धार्मिक पीठ चहार्ने ज्ञानेन्द्रले फेरि ‘गुड फ्राइडे’लाई निरन्तरता दिन थालेका छन् ।
सिप्रदीका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका हितैषी, मित्र र व्यवासयीयक साझेदार प्रभाकर शम्शेरका छोरा हुन् । प्रभाकर शम्शेरको निधनपछि सिद्धार्थले व्यवसायको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । सिद्धार्थ नेपालमा व्यक्तिगत तवरमा सबैभन्दा बढी आम्दानी कर बुझाउने व्यक्ति हुन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको लगानी भएको सोल्टी होटल, सूर्य नेपाल प्रालि, सिप्रदीसहित अधिकांस कम्पनीमा सिद्धार्थलाई नै शेयर होल्डर देखाइने गरिन्छ । ज्ञानेन्द्रको आर्थिक क्रियाकलाप र खर्चको चाँजो पाँजो उनै सिद्धार्थले मिलाउने गरेका छन् । त्यसैले ज्ञानेन्द्रले आयोजना गर्ने भेटघाट र भोजको प्रवन्ध पनि उनैले गर्छन् ।
तीन राजनीतिक दलमा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ‘हिन्दुराष्ट्र’ र ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को पक्षमा दबाब सृजना गर्ने अभियानस्वरुप राप्रपालाई एकीकृत गर्न सकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र केही खुसी थिए । तर, पूर्वपञ्च र राजाबादी भनेर चिनिएकाहरुको अभियानले जनमत बढ्ने नदेखेपछि अन्य शक्तिसँग उनले सम्वन्ध बढाएका हुन् ।
ज्ञानेन्द्रको रात्रिभोजमा कट्टर हिन्दुबादी नेता कमल थापा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी प्राय बोलाईंदैनन् । बरु शुक्रबारको डिनरमा संचारकर्मीहरुकै सहभागिता हुने गर्छ ।
झण्डै दुई दशकसम्म बीबीसी नेपाली सेवामा संचारकर्मीको रुपमा भूमिका निभाएका रविन्द्र मिश्र डिनरमा प्राय छुट्दैनन् । रविन्द्र मिश्र पूर्वसंचारकर्मी मात्र होइनन्, उनी हाल चर्चामा आएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समेत हुन् ।
राप्रपालाई छाडेर विवेकशील साझाका अध्यक्षलाई ज्ञानेन्द्रले किन भोजमा बोलाए होला ? भनेर धेरैलाई कौतहल लाग्न सक्छ । तर, मिश्रको भित्री सम्वन्ध दरबारसँगै छ । बौद्ध आरुबारीका स्थायी बासिन्दा मिश्रका पीता मनुजबाबु मिश्र प्रसिद्ध कलाकार हुन, जो कट्टर राजाबादी हुन् ।
२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःवहाली गरेकोमा असन्तुष्ट बनेका मिश्र बर्र्षौ वर्षसम्म घर बाहिर पनि निस्किएनन् र राजभक्ति मात्र देखाएनन प्रजातन्त्रइत्तरको कित्तामा आफूलाई उभ्याए ।
प्रजातन्त्रबादी भएको नाताले कांग्रेस र त्यसका शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्वन्ध बनाएका घिमिरे राजतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका तत्कालिन प्रधानसम्पादक घिमिरेसँगै प्रकाशक कैलास सिरोहियालाई प्रतिवन्धित माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको लेख र अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेबापत गिरफ्तार गरी अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो ।
हिरासतमा रहैकै बेला ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधिमार्फत घिमिरेसमक्ष सम्वन्धको प्रस्ताव गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । तथापी त्यो बेला सरकार नेपाली कांग्रेसको थियो ।
ज्ञानेन्द्रको भोजमा नियमित आएर धेरै सूचना वा जानकारी दिने अर्का संचारकर्मी हुन्, देवप्रकाश त्रिपाठी । बामपन्थी बिचारधारा बोकेका त्रिपाठीलाई तत्कालिन नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भित्र्याएका हुन् ।
कांग्रेसका तत्कालिन सभापति तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दुत्कार्न र नकारात्मक संचार प्रवाह गर्नकै लागि उनी २०५१ सालमा घटना र बिचार रेडियो कार्यक्रममा ल्याइएको थियो । गिरिजाप्रसादको अन्धभक्त भएर कांग्रेसमा प्रवेश गरेका त्रिपाठी यतिवेला गिरिजाप्रसाद, शेखर, सुजाता कोइराला र कृष्ण सिटौलाका कट्टर बिरोधी हुन् ।
कोइराला विरोधी क्याम्पको पक्षमा जस्तासुकै सूचना र समाचार प्रवाह गर्न शब्दबाण प्रयोग गर्न पछि नपर्ने त्रिपाठी कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुन् । हिन्दु राष्ट्र महाअभियानमा लागेका युवराज घिमिरेसँग त्रिपाठीको मत एकै छ । दुवै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छन ।
घिमिरे आमसंचारको माध्यमबाट बर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको विपक्षमा प्रस्तुत हुन्छन भने त्रिपाठी घटना र बिचार साप्ताहिक र अनलाईन तथा फेसबुक स्टाटसमार्फत राजसंस्थाको पक्षमा र गणतन्त्रको विपक्षमा प्रस्तुत हुन्छन् ।
त्रिपाठीको सम्वन्ध अहिले पनि भित्रीरुमा रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतसँग छ । उनी पूर्वमाओवादी र प्रचण्डका कट्टर बिरोधी हुन् भने बर्तमान केपी शर्मा ओलीका भक्त हुन् । उनी ओलीलाई राष्ट्रबादी नेताको उपमा दिएर प्रशंसा गर्छन् ।
‘महानिशा’ नामक उपन्यास प्रकाशित गरेर २०५८ साल जेठ १९ गते साँझ भएको ‘दरबार हत्याकाण्ड’ का दोषी पूर्वयूवराज दीपेन्द्र नै हुन भनेर सन्देश प्रवाह गरेपछि त्रिपाठीको सम्वन्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग घनिष्ट भएको थियो ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हरेक शुक्रबार रात्रिभोज कि आयोजना गर्छन या त सहभागी हुने गर्छन । यस्तै रात्रिभोज ज्ञानेन्द्रले पुस १० गते शुक्रबार निर्मल निवासमा आयोजना गरे । सो रात्रिभोजमा सिद्धार्थ राणासहित उनै घिमिरे र त्रिपाठी पनि सहभागी भए ।
स्रोतका अनुसार घिमिरे र त्रिपाठीले ज्ञानेन्द्रसँग करिव दुई घण्टा जति छलफल गरी सुझाव दिए । घिमिरेले ‘हिन्दु धर्मको एजेण्डालाई देशब्यापी बनाउँदै भारतीय संस्थापन पक्षसँग नजिकको सम्वन्ध बिस्तार गर्न भारतीय जनता पार्टी र उसको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस) सँग सहयोगको सम्वन्ध बढाउन सुझाएका थिए ।
अनलाईन मिडिया र जनमत बनाउन सक्ने संचारकर्मीसँग समन्वय र सहयोग गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले भोजमा सहभागी सिद्धार्थ राणालाई अह्राएका थिए । सिद्धार्थ र त्रिपाठीको भेट त्यसपछी सोल्टीमा भएको स्रोतले जनायो ।
राजसंस्थाको पक्षमा जनमत बनाउन खर्च चाहिने भन्दै सिद्धार्थले करिव एक करोड रुपैयाँको चेक पटक पटक गरेर काटीसकेको स्रोतको दाबी छ । तर त्यति धेरै रकम कुन कुन संचार माध्यम र संचारकर्मीलाई उपलब्ध गराइएको हो भन्ने पुष्टि हुन वाँकी छ ।
मिश्र, घिमिरे र त्रिपाठीसँगको पुस १० गतेको भेटबाट उत्साहित ज्ञानेन्द्र पुस १२ गते झापाको दमकस्थित हिमालय गुडरिक गएका थिए । चियावगान भित्रको दरबारमा सदा झैं जाडो छल्न ज्ञानेन्द्र जाने गर्छन ।
परिवारका सदस्य नलिइ सहयोगीका साथ दमक गएका ज्ञानेन्द्र १६ गते विहीबार साँझ काकरभिट्टास्थित होटल मेची क्राउनमा गएर अंग्रजी नयाँ वर्ष २०२१ को अवसरमा रात्रिभोजमा सहभागी भएका थिए । बागडोग्रा हुँदै नयाँ दिल्ली जाने योजनामा रहेका ज्ञानेन्द्र हाल दमकमै छन् ।
२०७७ पुष २१, १५: ०१: २४